Igbo, John: Lesson 024 - Obe, onye ozo nke nmutaghachi (Jọn 3:14-16) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 024 (The cross)
2. Jizọs na Nikọdimọs na-ekwurịta okwu (Jọn 2:23 - 3:21)
c) Obe, onye ozo nke nmutaghachi (Jọn 3:14-16)
14 Dika Mozis weliri agwọ n'ọhia, ọbuná otú a aghaghi iweli Nwa nke madu elu, 15 ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi. 16 N'ihi na Chineke huru uwa n'anya otú a, na Ọ nyere ọbuná Ọkpara Ọ muru nání Ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyì, kama ka o nwe ndu ebighi-ebi.
Jizos gara n'ihu izi Nikọdimọs ma mesie ya obi ike na amughi ime mmuo n'enweghi ezi ncheghari, ncheghari echiche, na okwukwe na onwu nke Kraist maka umu madu. Ụkpụrụ ndị a, Jizọs mere ka Nikọdimọs ghọtakwuo site n'izo aka na akụkọ ihe mere eme n'Izrel.
Ndị na-ejegharị n'ọzara Saịnaị tamuru ntamu megide Chineke, wee nupụ isi megide nduzi Ya (Ọnụ Ọgụgụ 21: 4-9). Chineke zitere agwọ na-enwu ọkụ ka ọ bụrụ ihe ga-esi na-ata ha ahụhụ, na-ata ahụhụ ha; ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nwụrụ n'ihi ya.
N'oge ahụ, ụfọdụ ghọtara mmehie ha, ha rịọrọ Mozis ka ọ rịọchitere Chineke arịrịọ ka O wepụ iwe Ya n'ahụ ha. Chineke nyere Mosis iwu ka o mee agwo aghara nke negosi ikpe Chineke. Nke a ka o buliri ndị mmadụ elu; egosi na iwe Chineke agwụla. N'ihi ya, onye ọ bụla nke na-ele anya na ihe ịrịba ama a gosiri na ntaramahụhụ agwụla, ma kwere na amara Chineke, a gwọrọ ya nsí agwọ ahụ.
Kemgbe ọnwụnwa Iv, agwọ ahụ ghọrọ ihe nnọchianya nke ihe ọjọọ. Mgbe Jisos biara, o bu nmehie madu. Ya mere, onye amaghi mmehie ọ bụla ghọrọ mmehie maka anyị. Jizos di ka agwo agwo ahu nke di n'ala ozara nke nwere nsi, ya mere Jisos abughi nmehie, mgbe ayi nabu nmehie ayi.
Ọkpara Chineke adighi-abia n'elu uwa n'atu di nma, kama n'idi obi umeala di ka Nwa nke madu, bu ihe ngbu na ihe ngbu, bu ihe ojo nke Iwu ahu. Na ụdị mmadụ, ọ nwere ike ịnwụ n'ọnọdụ anyị. 'Nwa nke madu' bu ihe negosi ihe di iche nye ya. Dịka agwọ ahụ e buliri elu gosipụtara iwepụ iwe Chineke, otú ahụ ka Kraịst kpogidere na-abụ ihe nnọchianya nke oke iwe Chineke. Ebubere nmehie anyi nile n'ebe Okpara Ya no ka O wepu anyi site n'onwu Ya.
Onye ọ bụla nọ n'ọzara na-ele agwọ ahụ e weliri elu, ma kwere nkwa Chineke, agwọ agwọ gwọrọ ya. Inwe obi ike n'amara amara a nyere onye kwere ekwe ndu na ndu. Onye n'ile anya n'osisi ma rapara nye onye ahu a kpolitere n'onwu na-enweta ndu ebighebi. Paul na-ede, "A kpọgidere m n'obe Kraịst, ma m dị ndụ, ọ bụghị m ma Kraist bi n'ime m." Ọnwụ ya bụ nke m, ya bụ ndụ ya. Onye kwere ma nakwere onwu nke Kraist bu n'onye ziri ezi ma soro ya biri ruo mgbe ebighebi. Njikọ a na-enyekwa anyị mkpakọrịta nke mbilite n'ọnwụ ya.
N'ịbụ onye a mara ikpe dịka anyị bụ, ile anya na Jizọs ga-azọpụta. Ọ na-emepụta n'ime anyị ọmụmụ ọzọ. Enweghi uzo ozo nye Chineke ma oburu site na ndi akpotara. Ọ bụ ya mere Setan ji na-awakpo ụkpụrụ abụọ nke Nzọpụta: ehihie na ụbọchị, nzọpụta nke Chineke na nragide Kraịst, ma na abụọ ndị a bụ nzọpụta ụwa.
Chineke bụ ịhụnanya; Obi ebere Ya dị ka oké osimiri na-adịghị agwụ agwụ. N'anya ahụ ọ hapụghị ụwa anyị si n'ezi ofufe dapụ, kama ọ nọgidere na-ahụ anyị n'anya. Ọ dịghị ajụ ndị nnupụisi na-eme mmehie ma nwee ebere. Àjà nke Ọkpara Ya na-emezu ihe niile a chọrọ n'aka ezi omume maka nzoputa anyị, ọ dịghị nzọpụta ọbụla na Ọkpara ahụ dị.
Nwanna, ị ga-achụrụ otu narị pound maka enyi gị? Ị ga-adị njikere ịga mkpọrọ n'ụlọ ya? Ma ọ bụ ịnwụ n'ọnọdụ ya? Ma eleghị anya, ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya, ma ọ bụrụ na ọ bụ onye iro gị. Nke a na-ekwu maka ịdị ukwuu nke ịhụnanya Chineke n'ịchụ Ọkpara Ya maka ndị omempụ ịzọpụta ha.
Kraist mezuru nzoputa nke uwa n'obe. Anyị nile chọrọ àjà Jizọs. Ụdị mmadụ nile, ndị maara ihe ma ọ bụ ndị na-amaghị, ndị dị mma ma ọ bụ ndị jọgburu onwe ha, ndị bara ọgaranya ma ọ bụ ndị ogbenye, ndị dị mma ma ọ bụ ndị jọgburu onwe ya, ọ dịghị onye ọ bụla bụ onye ezi omume n'onwe ya.
Kraist emeela ka ụwa dị n'udo nye Nna ya.N'ụzọ dị ịtụnanya, ụmụ mmadụ aghọtaghị eziokwu a ma e wezụga ndị kweere na ndị a kpọgburu. Mkpakọrịta gị nke ntụkwasị obi na Onye nzọpụta kpebiri nzọpụta gị. Enweghị okwukwe ị ga-anọgide na-anọ n'okpuru iwe Chineke. A na-ewere ọrụ gị dị ka ndị na-emeghị ihe n'eziokwu ma bụrụ ndị ruru unyi n'ihi ìhè nke ịdị nsọ nke Chineke. Nikọdimọs, onye na-ede iwu na onye nkụzi ziri ezi aghaghị ịnụ okwu ndị a, okwu ndị wutere ya.
Onye obula nke nakweere nzoputa nke obe, ikwere na Okpara ahu elu n'elu osisi nke ihere gebi ndu ma obugh ihe ngbochi n'etiti ya na Chineke. Ị kelere Jizọs maka mgbaghara ya? Ị nyefeela ndụ gị?
Onye kwere na Kraist di ndu; Onye ọ bula nke nānọgide nime Kraist agaghi-anwu anwu. Onye obula nke natara Kraist nata ndu ebighebi. Okwukwe na-emesi anyị obi ike banyere ebe obibi nke Mmụọ Nsọ. Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe dị mkpa n'amaokwu nke 14 ruo 16, ị ga-achọpụta ihe kacha mkpa nke ozioma ahụ n'otu ederede.
EKPERE: Nna nke Eluigwe, anyị na-efe gị maka ịhụnanya na-enweghị ngwụcha. I nyere Ọkpara ị mụrụ naanị gị ịnwụ n'ọnọdụ anyị. O buru mmehie anyị na ntaramahụhụ anyị, wepụta anyị n'iwe gị. Anyị na-ele anya n'obe, ịtụkwasị obi, ịkwado na ekele. Ị gbaghaara mmehie anyị ma mezie ụwa ka gị na ya dịrị ná mma. Nyere anyi aka igwa ndi ozo banyere ozi a, ka ha wee nweta ndu ebighebi site n'okwu anyi Jizos Kraist.
Olee otú Kraịst si yie agwo ahụ n'ọzara?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:45 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)